ဒစ်စ္စနေ ရဲ့ D.MAGIC ကို ဘယ်လို ဝင်ရောက်ရမလဲ?
သင့် ဖုန်းရဲ့ အင်တာနက် စနစ် မှ တဆင့် http://tmm.8elements.mobi/disney သို့ဝင်ရောက်လိုက်ပါ။ bookmark မှတ်ထားဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်။
D.MAGIC မှာ ဘာတွေ ရနိုင်လဲ?
D.MAGIC ဆိုတာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ကစား ဖို့အတွက် ရာပေါင်း များစွာသော အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု တွေ ပါဝင်တဲ့ မိုဘိုင်းလ်း ထုတ်ကုန် ဝန်ဆောင်မှု တခုပါ။ မြန်မာ ပြည်မှာရှိတဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှု တွေ အားလုံးထက် ရွေးချယ် တံဆိပ် နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု တွေ ပိုမို ပြည့်စုံ ပြီး အများအပြား ကို ယူဆောင်လယပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ http://tmm.8elements.mobi/disney သို့ ဝင်ရောက်ပြီး အယ်ဒီတာ့လက်ရွေးစင်၊ PIXAR လိုနာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေ ရဲ့ စာမျက်နှာတွေ (သို့) မတူညီတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အမျိုးအစား တွေ ထဲ မှာရှာကြည့် ပြီး သင့် စိတ် ကြိုက်ကိုရှာဖို့ အတွက် ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခု ခြင်းစီ ရဲ့ အသေးစိတ်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး တော့လဲ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှု အများစုမှာ ၅၅၀ (သို့) ၁,၀၅၀ ဖြစ်သော်လည်း ထို့ထက် နည်းနည်း ဖြင့် ဝေါလ်ပေပါ ကောင်းကောင်း လေး တစ်ခုကို ရနိုင်သလို၊ ထို့ထက် များများ ဖြင့် အကောင်းစား ဂိမ်း တစ်ခု ကို ရနိုင်သည်။ နာမည်ကြီး တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များ အတွက်တော့ အဲဒီလောက် က မများ ပါဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကတော့ D.MAGIC အဖွဲ့ ကို တစ်ပါတ် ၃၁၅ ကျပ် နဲ့ ဝင်ပြီး ရရှိလာသော လက်မှတ်များ နဲ့ အမိုက်စား ဖျော်ဖြေရေး ထုတ်လုပ် မှုတွေ ကို ရယူလိုက်ပါ။
D.MAGIC အဖွဲ့ ကို ဘာကြောင့် ဝင်ရမှာလဲ။?
D.MAGIC အဖွဲ့ ဝင် ထားသူ အနေနဲ့ အခွင့်ထူး များစွာ ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု တွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အတွက် အပါတ်စဉ် လက်မှတ်4စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု တွေ ကို လည်း ၅၀% လျော့ ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူ ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ လင့်ခ် အတိုင်းသွား ၍ အဖွဲ့ ဝင် ထား ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။http://tmm.8elements.mobi/disney/d.magic
ဘာလို့ D.MAGIC အဖွဲ့ ကို ဝင်လို့မရတာလဲ?
D.MAGIC ကနေ ထုတ်လုပ်မှု တွေဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အပတ်တိုင်း သင်တို့အား လက်မှတ် ပေးပါတယ်။ လက်မှတ် တစ်ခုချင်းစီ ကို ထုတ်လုပ်မှု ၁ ခုစီ နဲ့ လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏စုစုပေါင်း လက်မှတ် အရေအတွက်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ် အကောင့် စာမျက်နှာ တွင် စစ်ဆေးနိုင် ပြီး အမိုက်စား ထုတ်လုပ်မှု တွေ နဲ့ လဲလှယ်ဖို မ့မေကြနဲ့ နော်။
D.MAGIC ကနေ ဂိမ်း ဘယ်လို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မလဲ?
D.MAGIC ကို http://tmm.8elements.mobi/disney မှဝင်ရောက်သည့် အခါ error စာတမ်း ပြနေပါတယ်?